❤️ Instagram ayivumi ukuba ndingene : Facebook - Facebook
I-Instagram liqonga lemidiya yoluntu enamandla, isetyenziswa zizigidi zabantu yonke imihla ukuthumela iifoto kunye neevidiyo zokuyila kunye nokubona ukuba yintoni abahlobo kunye abantu abanempembelelo. Amashishini amaninzi asebenzisa isayithi ukwabelana ngomxholo nabalandeli babo kwaye bakhulise ishishini labo..
Kuyakhathaza kakhulu ukungakwazi ukunxibelelana neyakho Iakhawunti ye-instagram, kodwa inyaniso kukuba abantu abaninzi bahlangabezana nale meko mihla le. Zininzi iinkcazo ezinokubakho ngalo mcimbi..
Abaphembeleli abaninzi, oosomashishini kunye namashishini basebenzisa i-Instagram njengeqonga loshishino. Xa bengakwazi ukufikelela kwiiakhawunti zabo, inokuphazamisa ishishini, ubukho bemidiya yoluntu kunye nengeniso.
Ngethamsanqa, ngokuqhelekileyo kukho ukulungiswa okulula kwiingxaki ezininzi. Kwesi sikhokelo, uya kufumana ulwazi malunga nendlela yokudibanisa kwakhona kwi-akhawunti yakho ye-Instagram.
Instagram Login Imiyalezo Imposiso
Ukuba ufumana umyalezo wemposiso okwazisa ukuba umzamo woqhagamshelo lwakho awuphumelelanga, ukhetho lwakho lokuqala kukufaka kwakhona igama lokugqitha kwaye uzame kwakhona. Ukuba ayisebenzi, kuthetha ukuba kukho enye ingxaki kwiakhawunti yakho.
Xa iinzame zakho zokungena zisilele, ungafumana omnye wemiyalezo yemposiso emininzi, ngamanye amaxesha ngqo kwifowuni yakho kwaye ngamanye amaxesha kwi-imeyile yakho. Akukho mntu uthanda ukufumana umyalezo wemposiso engalindelekanga, kodwa inzuzo kukuba lo myalezo ukunika isalathiso sokuba kutheni usilele ukudibanisa.
Nazi ezinye zezaziso zokusilela kokungena kwi-Instagram:
uxolo, bekukho ingxaki ngesicelo sakho.
igama Umsebenzisi we-Instagram akafunyanwanga.
Thina ayikwazi ukuqhagamshela kwiakhawunti yakho.
Ndiyacela Jonga igama lakho lomsebenzisi kwaye uzame kwakhona.
Ngokuchaseneyo Ulibele igama lokugqitha le “igama lomsebenzisi” ?
Igama igama lomsebenzisi olifakileyo asiyo-akhawunti.
Ngaphambi kokuba singene kwiindlela zokulungisa le miba, masiqale sijonge izizathu ezinokwenzeka zempazamo yonxibelelwano. Imiyalezo yempazamo ye-Instagram ihlala ikunika umkhondo olungileyo malunga nonobangela wengxaki kunye nesisombululo sayo..
Iimbangela ezinokwenzeka zokuSilela koQhagamshelwano
Esona sizathu siqhelekileyo sokungaphumeleli ukungena kukuba ufake igama eligqithisiweyo elingalunganga, okwenzeka rhoqo kakhulu. Isenokuba yindlela elula yokuchwetheza, impazamo yokuchwetheza (icala eliphezulu okanye elisezantsi), okanye igama eliyimfihlo elingalunganga. Jonga igama lokugqithisa lakho lichanekile, kwaye ukuba yingxaki yegama lokugqitha, sebenzisa ikhonkco lokucwangcisa ngokutsha igama elinikwe ngu I-Instagram.
Iimpazamo zokungena kwi-Instagram zihlala zibangelwa kukungena kokuqala kwisixhobo esitsha. Xa iqonga lingasazi isixhobo osisebenzisayo, isenokukuthintela ekufikeleleni kuyo de wenze uqinisekiso olungaphaya.
Nangona le nkqubo ingabonakala ingathandeki kwaye ingekho mfuneko, eli linyathelo elibalulekileyo lokhuseleko. Ukuba umntu uzama hack akhawunti yakho Instagram ngokungena usebenzisa isixhobo sabo, eli nyathelo linokuyimisa. Uqinisekiso olongezelelweyo luqinisekisa ukuba ukhuseleko kunye ubumfihlo beakhawunti yakho zigciniwe.
Eminye imiba enxulumene nesixhobo ibandakanya ukusebenzisa isixhobo esidala esingasaxhasi i-Instagram app, kunye nexesha elingalunganga kunye noseto lomhla kwisixhobo.
Ngamaxesha athile, imemori okanye ingxaki yehardware kwifowuni yakho inokuchaphazela ukusebenza kosetyenziso. Idatha kunye noqhagamshelwano lwe-Wi-Fi lunokuba yimpazamo, kwaye mhlawumbi inokubangela ingxaki yonxibelelwano phakathi kwesixhobo sakho kunye nomncedisi we-Instagram..
Isizathu sokugqibela esinokwenzeka sokungaphumeleli kokungena yiakhawunti yakho ye-Instagram ivaliwe okanye icinyiwe.. Usenokuba uyenzile le nto ngokwakho, nangengozi. Kusenokwenzeka ukuba umntu uqhekeze iakhawunti yakho okanye iqonga le-Instagram linesizathu sokuthintela okwethutyana ukufikelela kwiakhawunti yakho.
Isikhokelo sendlela yokungena kwakhona kwiakhawunti yakho ye-Instagram
Ngoku lixesha lokujonga kwizisombululo zokusilela kokungena kwi-Instagram. Nje ukuba ufumane umyalezo wemposiso kwaye ube neembono malunga nonobangela, ungazama ezi ndlela zingezantsi.
Uninzi lwezi lulungiso olukhawulezayo, kodwa ezinye zisenokufuna ixesha nomgudu omncinane ukuze zichonge ingxaki zize zifumane isisombululo. Usenokufuna ukuqhagamshelana nenkonzo yabathengi be-Instagram okanye ufumane i-app yangaphandle ukukunceda..
Nazi ezinye izilungiso ezikhawulezayo ezinokukunceda ukulungisa ingxaki:
Thatha ikhefu elifutshane kwaye ucinge ngephasiwedi yakho
Ukuba uzame ukungena kwakhona ngephasiwedi efanayo, Ukunqumama kunokukunceda ukhumbule into malunga nephasiwedi yakho. Ukuba akukho njalo, sebenzisa nje igama lokuseta kwakhona ikhonkco kwi-instagram.
Vula kwaye uvale isixhobo sakho
Ukuqalisa kwakhona lulungiso olukhawulezayo oluhlala lusebenza kakuhle. Oku kunokusombulula imiba yoqhagamshelo phakathi kwesixhobo kunye neseva yesicelo. Rhoqo, xa sisebenzisa izixhobo zethu kakhulu, usetyenziso lunokuqalisa ukungasebenzi, ngoko zama eli nyathelo kuqala.
Jonga uqhagamshelwano lwakho
Ukuba idatha yefowuni yakho okanye uqhagamshelo lweWi-Fi aluvulwanga, awukwazi ukungena. Rhoqo, umdibaniso wakho uyasilela ngaphandle kokuba uyiqonde. Uqhagamshelo olubuthathaka okanye oluphakathi lunokuchaphazela ukukwazi kwakho ukuqhagamshela. Ungaphinda uqalise i-router yakho ye-Wi-Fi ukuba ufumana umyalezo wemposiso malunga nokuqhagamshela kwiseva.
Hlaziya ixesha kunye nesetingi zomhla zesixhobo sakho
Usenokuba kwisixhobo esitsha okanye esahlukileyo esinexesha elingalunganga noseto lomhla. Kwakhona kunokwenzeka ukuba olu seto lutshintshwe ngempazamo kwisixhobo sakho sesiqhelo.. Ezi mpazamo zichaphazela ukukwazi kwakho ukungena kwi-Instagram. Khangela ukuba useto luchanekile kwaye uhlaziye ukuba kuyimfuneko. Eyona ndlela ilungileyo kukukhetha ukuhlaziya ngokuzenzekelayo ixesha kunye noseto lomhla.
Cima i-cache ye-app kunye nedatha
Ukuba impazamo ivela kwisicelo ngokwaso, Ukucoca i-cache kaninzi kunokusombulula ingxaki. Kule meko, kufuneka uye kuseto lwesixhobo. Kwiisetingi ze-app, unokukhetha i-Instagram kwaye ukhethe ukhetho lokucima i-cache kunye nedatha. Unokuzama nokungena kwiPC yakho okanye esinye isixhobo ukubona ukuba unokufikelela kwiakhawunti yakho apho..
Izisombululo zokungena kwi-Instagram ezixoxwe ngasentla zezinye zezona zilula kwaye zikhawulezayo ngeenxa zonke.. Uninzi lweengxaki zinokusonjululwa ngezi. Ukuba awukwazi ukungena kwiakhawunti yakho, unokufuna isisombululo esiphezulu.
Seta kwakhona igama lokugqitha lakho
Ungazama ukuseta kwakhona igama lokugqitha lakho ukuba awukhumbuli echanekileyo. Kuthatha imizuzu embalwa, kodwa ihlala isebenza kakuhle.
Esinye isisombululo onokuzama kukuhlaziya i-app. Xa iapp yakho iphelelwe lixesha, ayisasebenzi kakuhle njengoko kufanele kwaye ayinayo iimpawu kunye nemisebenzi yamva nje.
Ngena ngeakhawunti yakho kaFacebook
Ungazama nokungena ngeakhawunti yakho kaFacebook. Ukuba zonke ezi nzame ziyasilela, ukubheja kwakho kukunxibelelana ne-Instagram kwaye ubacele ukuba bakuncede ulungise ingxaki yeakhawunti.